Madaxweynaha IBM Oo Sheegay In Chips Cunno Ay Socon Karto Laba Sano Oo Kale | Waxaan ka socdaa mac
Kabaha kululeeyaha cusub iyo fiilooyinka gudaha
Sida uu madaxweynaha IBM Jim Whitehurst u sharaxay BBC, Chips yari wuxuu socon karaa laba sano oo dheeri ah. Shirkada tiknoolajiyada caanka ah ee la tartamaysay Apple waagii hore horumarka iyo iibinta kombiyuutarada shaqsiyadeed waxay sharraxaysaa in qiyaasaheeda ay yihiin khasaaro ka badan $ 110.000 bilyan sanadkan qeybta baabuurta qaybo ka mid ah oo ka maqan awgood.
Laakiin waa in warshadaha teknolojiyadda aan laga dhaafi karin dhibaatooyinka caqli gal ahaana waa in la yiraahdaa Dhibaatooyinka wax soo saarka qarka iyo microchip gudaha u gala dhammaan aaladaha elektarooniga ah ee aan isticmaalno maalinteenna maalin.
Laga soo bilaabo daahid badan oo maraakiibta illaa yaraanta khadadka wax soo saarka
Ugudambeyn, waxa macaamiisha ogeysiiyaan ayaa ah in rarka uu qaadanayo waqti aad uga dheer sidii la filayay iyo in khadadka wax soosaarku aysan awoodin inay helaan qaybaha ay ku soo uruuriyaan aaladaha tanina waxay ku dhacdaa dib udhac dheer waqtiga rarka.
Waxaan ku aragnaa qunsuliyadaha, gawaarida, kombiyuutarada, taleefannada casriga ah, qalabka iyo dhammaan noocyada qalabka elektarooniga ah Sida iska cad, tani dhibaato ayay ku tahay soosaarayaasha iyo adeegsadayaasha laftooda, kuwaas oo u arka rabitaankooda ah inay iibsadaan alaabooyin jahwareersan yaraanta awgeed.
Haddii hada aan usocono in rajooyinka dib udhaca ay yihiin kuwa mustaqbalka fog iyo in qaarkood ayba u maleynayaan inay sii socon doonto dhowr sano sida uu yahay madaxweynaha IBM, way yara adkaatay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Madaxweynaha IBM wuxuu leeyahay 'chip chip' wuxuu sii socon karaa laba sano oo dheeri ah